Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း)
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Norethisterone ကို တားဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။Norethisterone တွင် estrogen လုံးဝမပါဝင်သဖြင့် ၎င်းကို “ ဆေးအသေးစားလေးများ” ဟုလည်းခေါ်ကြလေ့ရှိသည်။Norethindrone (ပရိုဂျက်စတင် တမျိုး)သည် အောက်ပါအချက်နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်မရှိစေရန် တားဆီးပေးသည်။
၁။ မိန်းမကိုယ်အတွင်းရှိ အကျိအချွဲများကို ပိုထူအောင်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုးများမှာ မမျိုးဥဆီမရောက်နိုင်တော့သဖြင့် မျိုးအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ် ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း။
၂။ သားအိမ်နံရံဆီသို့ မျိုးအောင်ပြီးသား ဥလေး လာရောက်မကပ်တွယ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းသည် အမျိုးသမီးများ လစဉ်ရာသီစက်ဝန်း၏ အလယ်ရောက်ချိန်၌ ဖြစ်လေ့ရှိသည့် သားဥကြွေခြင်းကို လည်း တားဆီးပေးပါသည်။ဤ “ ဆေးအသေးစားလေးများ” သည် အခြားသော ပဋိသန္ဓေတားနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသော ကွန်ဒုံး၊အမျိုးသမီးအဂါၤထဲထည့်ရသော ပဋိသန္ဓေတားပစ္စည်းများထက် ပို၍ ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း သားဥကြွေခြင်းကို အမြဲတစေ
တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် estrogen နှင့် progestin ပူးတွဲပါဝင်သော ဟော်မုန်းဆေးများကဲ့သို့ အာနိသင်မထက်မြက်ပါ။Norethisterone ကို estrogen မသုံးစွဲသင့်သည့် အမျိုးသမီးများတွင် အဓိက အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရသွားခြင်းမဖြစ်စေရန် ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာသောက်သုံးရပါမည်။
Norethisterone သည် သင်နှင့် သင့်အဖော်အား လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် HIV၊ဆီးပူညောင်းကျ၊ကာလသားအစရှိသည်တို့ကို ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်းသိထားရမည်။
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Norethisterone ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် တနေ့လျှင်တကြိမ်) သောက်ပါ။ သင့်အတွက် သောက်ရအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မည့် အချိန်တချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီး နေ့စဉ် ထိုအချိန်တွင် အချိန်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန် သောက်ပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဆေးသောက်ပြီးနောက် ဗိုက်အောင့်/နာခြင်းများ ခံစားရပါက ဆေးကို ညစာစားအပြီး သို့မဟုတ် ညအိပ်ယာမဝင်မီ သောက်ပါ။ သင့်အတွက် မှတ်မိရလွယ်ကူစေမည့် အခြားသော
အချိန်တစ်ချိန်ကို ရွေးချယ်၍လည်း သောက်နိုင်သည်။ မည်သည့် အချိန်တွင်သောက်သည်ဖြစ်စေ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဆေးတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြား ၂၄နာရီ ကွာစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးကို နေ့စဉ် အချိန်မှန်မှန် သောက်ရပါမည်။
ရာသီစက်ဝန်း၏ ပထမဆုံးနေ့ (ရာသီစလာသည့် ပထမဆုံးနေ့)တွင် ဆေးစသောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုနေ့မဟုတ်ဘဲ အခြားနေ့များတွင် စတင်သောက်ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆေးအာနိသင်ပြရန် အချိန်လိုအပ်သည့်အတွက် မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရသွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဟော်မုန်းမဟုတ်သော ပဋိသန္ဓေတားနည်းလမ်းများ (ဥပမာ။ ။ ကွန်ဒုံး၊သုတ်ပိုးသတ်ဆေး စသည်) တို့ကို ပါ ပထမ ၄၈နာရီအတွင်း အသုံးပြုရမည်။
ထို့နောက် တစ်နေ့တစ်လုံးမှန်မှန် သောက်သွားရမည်။ ဆေးကဒ်၏ နောက်ဆုံးဆေးလုံးကို သောက်ပြီးပါက နောက်တစ်ရက်တွင် ဆေးကဒ်အသစ်ကို ဆက်သောက်ရမည်။ ဆေးတစ်ကဒ်နှင့် တစ်ကဒ်ကြားတွင် နားရန် မလိုသလို ဟော်မုန်းမပါသည့် မည်သည့် ဆေးပြားများကိုမှ သောက်ရန် မလိုပေ။ ဆေးသောက်ပြီးနောက် ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း၊နည်းခြင်း၊များခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြားရက်များတွင်လည်း သွေးအနည်းငယ် ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆေးသောက်ခြင်းကို ရပ်စရာမလိုပါ။
ဆေးသောက်ရန်မေ့လျှင် ၊ဆေးကို အချိန်မှန်မှန်မသောက်လျှင်
သို့မဟုတ် ဆေးကဒ်အသစ်သောက်ရန် နောက်ကျလျှင် မတော်တဆကိုယ်ဝန်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆေးသောက်ရန်မေ့သွားခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် သောက်နေကျအချိန်ထက် ၃နာရီ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုနောက်ကျပြီးမှ သောက်မိလျှင် သို့မဟုတ် ဝမ်းလျှောနေလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ပြီး မကြာမီအန်လျှင် နောက်၄၈နာရီအတွင်း လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ထပ်ဆောင်း နည်းလမ်းများဖြစ်သော ကွန်ဒုံး သို့မဟုတ် သုတ်ပိုးသတ်ဆေးတို့ကို အသုံးပြုပါ။
ဤဆေး၏ အခြားသော ပုံစံများ (ဥပမာ။ ။ အရေပြားတွင်ကပ်ရသော ပုံစံ၊အခြားသော ပဋိသန္ဓေတားသောက်ဆေးများ)သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲလိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ဆေးကဒ်တွင်ပါသော ဆေးအညွန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Norethisterone ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Norethisterone ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Norethisterone ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝေးရာမှာထားပါ။)
Norethisterone ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Norethisterone ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Norethisterone ၊အခြားသော ပဋိသန္ဓေတားသောက်ဆေးများ သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ။
သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ အတက်ကျ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်အား မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ —–>carbamazepine (Tegretol), phenobarbital (Luminal,Solfoton), phenytoin (Dilantin),rifampin (Rifadin, Rimactane)။ သင်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆရန်လိုမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘေးထွက်လက္ခဏာများ ရှိမရှိကိုလည်း သေချာစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။
သင့်အနေဖြင့် လတ်တလော ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ထားလျှင်၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ၊ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ်
ဖြစ်ဖူးလျင်၊မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းခြင်းများရှိလျှင်၊ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသော်လည်း သန္ဓေသားမှာ သားအိမ်ထဲမှ ထွက်မလာဘဲ အထဲတွင် ဆက်လက်ရှိနေလျှင်၊ခြေထောက်၊အဆုတ်၊ဦးနှောက် သို့မဟုတ် မျက်စိတို့ထဲတွင် သွေးခဲများ ရှိနေခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လေဖြန်းခြင်း၊နှလုံးကို သွေးပို့သော သွေးကြောပြဿနာများ၊သွေးခဲလွယ်ခြင်း၊အတက်ရောဂါရှိခြင်း၊ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်ခြင်း၊စိတ်ကျရောဂါရှိခြင်း၊ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိခြင်း၊သွေးတွင်း အဆီဓါတ်များခြင်း၊ဆီးချိုရှိခြင်း၊ နှလုံး၊ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း ပြောပြပါ။Norethisterone ကို ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ရန် မည်သည့်အခါမှ မသုံးရပါ။
သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက Norethisterone သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် Norethisterone ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုများစေသဖြင့်သင်ဆေးလိပ်သောက်တတ်ပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
X=သောက်သုံး၍မရပါ (လုံးဝမတည့်ပါ)။N=အခြေအနေကို မသိရသေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။)
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Norethisterone သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
ရုတ်တရက် ထုံကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း (အထူးသဖြင့် ခန္တာကိုယ် တခြမ်း)။
ရုတ်တရက် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊မျက်စိအနောက်ဖက်မှနာခြင်း၊အမြင်အာရုံ၊စကားပြောခြင်း သို့မဟုတ် ခန္တာကိုယ်ဟန်ချက်ထိန်းရာ၌ ပြဿနာများရှိခြင်း။
ခြေလက်များ ဖောရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်တရက် တက်ခြင်း။
စိတ်ကျရောဂါ၏ လက္ခဏာများ (အိပ်မပျော်ခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊စိတ်အပြောင်းအလဲများခြင်း)။။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ထိုနာကျင်ခြင်းသည် လက်မောင်းနှင့် ပုခုံးသို့ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊နေရထိုင်ရ မကောင်းခြင်း။
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ခပ်ငွေ့ငွေ့ဖျားခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ဝမ်းဖြူဖြူများသွားခြင်း၊မျက်စိ သို့မဟုတ် အသားဝါခြင်း။
အရေပြား ယားခြင်း၊အနီစက်များ ထွက်ခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Norethisterone ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး
(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။) အထူးသဖြင့်
 Aprepitant, carbamazepine, felbamate, griseofulvin, HIV protease inhibitors
(eg, ritonavir), hydantoins (eg, phenytoin), modafinil, nevirapine, rifampin,
St. John’s wort, or tetracyclines —–> norethindrone ၏ အကျိုးအာနိသင်ကို လျော့ကျစေမည်။
 Corticosteroids (eg, prednisone), theophylline, or troleandomycin —- >norethindrone ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေမည်။
 Beta-adrenergic blockers (eg, propranolol), lamotrigine, or thyroid medicines —-> norethindrone ၏ အကျိုးအာနိသင်ကို လျော့ကျစေမည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Norethisterone က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Norethisterone ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
ကျောက်ကပ် နှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများရှိခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးဆင်းခြင်းများအတွက်
ရာသီစက်ဝန်း ဒုတိယတဝက်စတင်သော နေ့မှစ၍ တနေ့လျှင် ၂.၅ – ၁၀ မီလီဂရမ်ကို ၅ရက် မှ ၁၀ရက်အထိ သောက်ပါ။
ဝ.၃၅မီလီဂရမ်ကို နေ့စဉ်တူညီသော အချိန်၌ တနေ့တကြိမ် သောက်သုံးရမည်။
တနေ့လျှင် ၅မီလီဂရမ်ကို နှစ်ပတ်တိတိ ပေးရမည်။ ထို့နောက် တနေ့လျှင် ၁၅မီလီဂရမ် ရောက်သည်အထိ ဆေးပမာဏကို ၂ပတ်လျှင်တခါ ၂.၅မီလီဂရမ်စီ တိုးသွားပါ။ ထိုပမာဏကို ၆လမှ ၉လအထိ သို့မဟုတ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်စရာ သွေးဆင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည် အထိ ဆက်လက်ပေးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Norethisterone (နော်အီသီစတီရုန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
သောက်ဆေးပြား : ဝ.၃၅ မီလီဂရမ်
Norethisterone ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Norethisterone http://www.webmd.com/drugs/2/drug-16321/norethindrone-contraceptive-oral/details. Accessed July 14, 2016.
Norethisterone http://patient.info/medicine/norethisterone-for- painful-or- heavy-periods-primolut- n-utovlan. Accessed July 14, 2016.
Norethisterone https://www.drugs.com/cdi/norethindrone.html. Accessed July 14,2016.